राष्ट्रपतिले शर्मालाई हटाएको पुष्टि, नयाँ सल्लाहकारमा ढकाल नियुक्त ! - नेपालबहस
राष्ट्रपतिले शर्मालाई हटाएको पुष्टि, नयाँ सल्लाहकारमा ढकाल नियुक्त !
| १६:३१:५० मा प्रकाशित
२२ भदौ, काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्ना सञ्चारविज्ञ सल्लाहकार माधव शर्मालाई हटाएको पुष्टि भएको छ । नयाँ सञ्चारविज्ञमा शीतलनिवासले टीका ढकाललाई नियुक्त गरेपछि शर्मालाई झण्डै एक महिनाअघि प्रेस काउन्सिल प्रकरणकै क्रममा हटाएको पुष्टि भएको हो ।
सरकारले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाएको थियो । प्रेस काउन्सिल प्रकरणमा तत्कालिन प्रेस सल्लाहकार शर्माले सुझाव दिन खोज्दा सरकारको आलोचना गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले उनलाई हटाएकी थिइन् । सो समाचार पहिलो पटक नेपालबहस डटकमले प्रकाशित गरेको थियो ।
जसको पुष्टि झण्डै तीन हप्तापछि शीतलनिवासले गरेको छ । त्रिविबाट अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका पाँचथरका टीका ढकाललाई सञ्चारविज्ञ एवं राष्ट्रपतिको सल्लाहमा नियुक्त गरिएको हो ।
ढकाललाई शर्माकै जसरी सूचना र सञ्चारसहितकाे जिम्मेवारी दिइएको छ र उनले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन् । यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्व सल्लाहकार शर्मासँगै अर्का विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल, सुरक्षा मामिला विज्ञ नेत्रबहादुर थापालाई पनि हटाएको छ । थापा नेपाली सेनाका पूर्व रथीका साथै राप्रपा अध्न्यक्ष कमल थापाका सहाेदर दाजु पनि हुन् । दुवैले राजीनामा दिएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रपतिकाे सचिवालयमा कार्यरत दीपा शर्मा पनि हटाइएकी छिन् ।
काउन्सिल काण्डमा राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्मा बर्खास्त !
नेल्सन मण्डेला वकीलको निधनमा दक्षिण अफ्रिकामा शोक प्रकट १ हप्ता पहिले
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानानान्तरण गर्न राष्ट्रपतिबाट ध्यानाकर्षण २ हप्ता पहिले
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियान, डढेलो र मौसम परिवर्तनको चर्चा २ हप्ता पहिले
आगलागीमा जनधनको ठूलो क्षति भएकोमा राष्ट्रपतिद्धारा दुःख व्यक्त ३ हप्ता पहिले
दिदी मारियनको दृष्टिमा डोनाल्ड ट्रम्प ढँटुवा र सिद्धान्तहीन व्यक्ति १ महिना पहिले
काेराेनाका कारण राष्ट्रपति पशुपतिनाथ सरिक नहुने १ महिना पहिले
आईपीएल २०२० मा सर्वाधिक छक्का हान्ने १० व्याट्सम्यान, धोनी र कोहली आउट ! ५ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश २४ मिनेट पहिले
बसको ठक्करबाट स्कुटरमा चढेका श्रीमान, श्रीमति र छोराको मृत्यु ४१ मिनेट पहिले
डलर भन्दै कागजको पोको दिएर लाखौ लुट्ने खेलबहादुर र रेलबहादुरको गिरोह पक्राउ ४८ मिनेट पहिले
प्रदेश नं १ मा १८१ संक्रमित थपिए ५२ मिनेट पहिले
यमनी सरकार र हुथी विद्रोहीबीच बन्दी आदान प्रदानको लागि सहमति ५६ मिनेट पहिले
कामै सम्पन्न नगरी ७५ लाख भुक्तानी ! १ घण्टा पहिले
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ९ जना पक्राउ २ घण्टा पहिले
हठवादी सरकार र निरीह बालबालिकाहरु ३ घण्टा पहिले